दाङकी चेली निगाता मिस नेपालको फाइनलमा « Chhahara Online – Nepali Online News Portal
दाङकी चेली निगाता मिस नेपालको फाइनलमा
केएल पीडित दाङ - ६ मंसिर २०७७, शनिबार
देशभरिका २ सय बढी प्रतिष्पर्धीहरुलाई उछिनेर दाङकी चेली डा. निगाता केसी मिस नेपाल २०२० को फाइनलमा पुगेकी छन् ।
द हिडन टिजर्सले आयोजना गरेको मिस नेपाल २०२० मंसिर २० गते फाइनल हुँदैछ । प्रतियोगितामा विभिन्न विधासहित उपाधिका लागि निगाता कडा मिहेनत गरिरहेकी छिन् ।
घोराही उपमहानगरपालिका–१५ रतनपुर निवासी बिष्णुबहादुर केसी र ललिता केसीकी कान्छी छोरी डा निगाता पढाईलगायत अन्य क्षेत्रमा उत्तिकै अब्बल छिन् । कला क्षेत्रमा विशेष रुचि राख्ने निगाताले चिकित्सा विषयमा एमबिबिएस सकाएकी छिन् । वहुप्रतिभाशाली एवं आकर्षक व्यक्तित्वकी धनी २४ वर्षीया निगाताको उचाइ ५ फिट ५ इन्च छ ।
भविष्यमा छाला रोग विशेषज्ञ बनेर एसिड आक्रमण पीडितहरुको सेवा र उपचारमा संलग्न हुने डा निगाताको लक्ष्य छ । आफ्नो लक्ष्य र सपना पूरा गर्न मिस नेपालमा सहभागी भएको बताउने निगाता प्रतियोगितामा विभिन्न बिधासहित उपाधिको लागि अन्तिम प्रतिष्पर्धा गर्दैछिन् ।
प्रतियोगिताको अन्तिम तयारी चलिरहँदा आयोजक हिडन टिजर्सले मिस पपुलर च्वाइस अवार्डको लागि मतदान खुल्ला गरेको छ । यो अवार्डका लागि निगाताले आफूलाई भोट गर्न सबैलाई अपील गरेकी छिन् । आइएमइ पे (Ime Pay app) एप डाउनलोड गरी सोमार्फत प्रतिष्पर्धी नं. ७ की निगातालाई भोट गर्न सकिन्छ ।